Ihe a na-emekarị, obere, nnukwu, ọkara, obere obere akpụkpọ ụkwụ, okpokoro okpokoro, yana foto ndị a na-ahụ anya - Akwukwo nri - 2020
Ụdị ihe atụ dị iche iche: ndị nkịtị, obere, ibu, wdg.
Akara bụ obere ụmụ anụmanụ na-ekesa n'etiti mba nke ugwu ugwu. Na mkpokọta, e nwere ihe dị ka ụdị 130 dị iche iche, nke kachasị na-ebi na North America, Europe, North Asia.
Ekeghi igwu olulu, ma jiri ogwu nke umu oke, ma mee uzo ha n'okpuru snow na ohia. Ụmụ anụmanụ adịghị emerụ ahụ, kama nke ahụ, iri ụmụ ahụhụ na azụ ha, ebibi ọtụtụ pests nke oke ohia na ugbo.
Obere oge (America)
Nchacha (aja aja)
Nleta nkịtị bụ anụmanụ kachasị anụ a na Russia.
Ogologo ogologo nke 6-9 cm, ọdụ 3.5-5 cm. Ọkpụrụkpụ - 6-15 g. Ọ nwere ajị anụ ọkụ, elongated kpuchie, obere ntị na obere nwa anya.
Ọtụtụ mgbe, ọ na-edozi na oke ohia na ahihia ndi ozo, na-ahọrọ ebe ndi ozo na ebe iru mmiri di ka ebe obibi ya.
Na-arụsi ọrụ ike n'abalị, na-ahapụ ụlọ 2-3 awa tupu abalị dara. Na-eri ụdị ahụhụ dịgasị iche iche na ahịhịa ha, earthworms, frogs, mkpụrụ.
A na-ahụ nke a n'ụzọ doro anya na foto ahụ dị n'okpuru.
N'oge agụụ na-agụ nwere ike iri nri obere. N'oge nri, ọ na-anọkarị na nkwonkwo ụkwụ anọ, ma anụ ọhịa na-amị amị na-ejide ndị isi. Okpokorita n'osisi osisi nwere ike ịrị elu ma obu nru ububa.
N'ihi na afọ ahụ na-eweta atọ nne. Oge gestation nwere ike iri ụbọchị asatọ na iri asatọ na asatọ. Nwanyị na-arụpụta efọk nke epupụta stalks nke ahịhịa, na-etinye ihe dị nro n'ime ya. Okwu nke ndụ abụghị ihe karịrị afọ 1.5.
Ị nwere ike ịhụ anya nke ọma na vidiyo dị n'okpuru ebe a.
Baby shrew bụ obere umu na-azụonye bi na North America.
Aha ya nke sayensi bụ Sorex hoyi, anụmanụ a enwetawo aha nnabata nke onye na-ahụ maka ọdịdị na onye dọkịta si America Philip Hoy.
Ọ na-ebi na Canada na United States, bụ ebe ọ na-eji osisi ndị na-emepụta osisi na osisi ndị na-emepụta ihe n'oké ọhịa.
Ogologo oge nke ụdị okike a abụghị ihe karịrị 5 cm, gụnyere 2 cm - ọdụ. Ibu ibu ruru 2-2.5 grams. Uwe ahụ nwere ntụ ntụ agba aja-agba aja aja ma ọ bụ ọbara ọbara-aja aja na azụ, na ìhè na afọ. N'oge oyi, a na-agbacha aji niile..
Na-egosi ọrụ na oge ọ bụla nke ụbọchị, yana kwa afọ niile. Dị ka ihe ndị ọzọ, ọ na-azụ na obere ụmụ ahụhụ, ikpuru na obere invertebrates. Ndị iro dị iche iche bụ anụ nnụnụ, agwọ, nkịta ụlọ.
Oge mmeputara amalite na ọnwa mbụ nke oge okpomọkụ, ime afọ dị 18 ụbọchị. Ruo afọ ahụ zọpụtara na-eweta naanị otu ịwụbanke e nwere site na 3 ruo 8 ụmụ.
Obere oge - obere anu aruemi odude ke Russia, ye kiet ke otu n̄kpri-n̄kan ke otu mbon emi ẹkedude ke Europe.
Ọ bi n'ókèala ahụ site na mba Scandinavian na Far East, gụnyere Fr. Sakhalin.
N'ógbè dị n'ebe ugwu, na-adịgide ruo n'ókè nke oké osimiri na oké ọhịa. E depụtara na Red Book nke Murmansk mpaghara.
Ogologo anụ ahụ abụghị ihe karịrị 5 cm, nke 2.5-3 cm dara na ọdụ. Ọnụ ọgụgụ dị arọ bụ 3-4 grams. Ọ nwere nnukwu isi, nke na-eme ka ọ ghọọ proboscis.
Ọ bụrụ na e jiri ya tụnyere ụdị nke ọzọ, onye a nwere ọdụdụ kacha nta - ọ na-ewe ruo 54% n'ogologo ogologo.
E nwere ike ịhụ obere nha na foto dị n'okpuru.
Akpụkpọ ụkwụ ahụ bụ agba aja aja ma ọ bụ agba aja aja n'elu ma na-acha ntụ ntụ n'isi. A na-ekpuchikwa ọdụ ahụ na ajị ọcha dị mma na mgbanwe mgbanwe a na-ahụ anya site na ọchịchịrị ruo ìhè.
Na-ebi n'ọhịa na osisi dị iche iche., na n'ọnụ nke marshes. A na-ahụkwa obere azụ na steepụ, ọzara na steppes.
Ma n'oge nhazi ahụ, ọ hụrụ ebe ndị ị nwere ike ịchọta nnukwu nri, n'agbanyeghị oge na ọnọdụ. Ọ na-eri nri na obere ụmụ ahụhụ, larvae, spiders.
N'ihi ihe dị elu metabolism nwere ike rie ruo ugboro 80 kwa ụbọchịna-agbanwe oge ndị a na-ehi ụra. Mgbe ibu ọnụ na-anwụ n'ime awa ole na ole.
Maka otu afọ 1-2 mpempe akwụkwọ nwere ike hatched, na nke ọ bụla n'ime 8 (na-emekarị 4-5) ụmụ.
Obere ntakịrị bụ obere obere azụ. A na - achọta ya na Europe na Russia - site na Europe na Southern Siberia.
Isi ogologo 4-6 cm, mgbe ọdụ bụ 50-70% nke ogologo. Ibu ibu ruru gram 5. Na proboscis na ihu dị nnọọ elu, nke, tinyere ogologo ya, bụ ọdịiche dị ukwuu nke ụdị a site na obere nzụlite. Agba nke aji na azụ bụ site na agba aja aja na-acha uhie uhie, afọ na-acha ọkụ. N'oge oyi, ajị na-agba ọchịchịrị ọbụna karị.
Obere obere mmiri na-abanye n'ọhịa, na-eji nwayọọ nwayọọ eme ihe, ma ọ bụghị nke a na-agbanyeghị. Na-achọ na-emeghe ebe na akọrọ ahịhịa. Ọ na-eri nri na obere ụmụ ahụhụ, spiders, ikpuru, gụnyere nsị nsị, nsị ala, akwụkwọ akwụkwọ na ọtụtụ ndị ọzọ. Na-arụsi ọrụ ike n'ụbọchị.
Oge ozuzu na-adị n'oge okpomọkụ.n'oge nke 1-2 ndị na-eji 4-12 mmadụ apụta na anụmanụ.
Ogologo oge na-etinye aka na ogo ya n'etiti ndị obere na ndị nkịtị. Na-ebupụta ebe dị oke site n'ebe ọwụwa anyanwụ Europe ruo n'Ebe Ọwụwa Anyanwụ, Mongolia na Korea. Nke a bụ naanị nlekọta nke a pụrụ ịchọta n'ọnọdụ ọ bụla sitere na floodplains gaa n'ugwu ugwu.
N'otu oge ahụ, a na-achọta ọnụọgụ anụ nke ụmụ anụmanụ ndị a nanị n'ọhịa oké ọhịa. Ọ bụ otu n'ime ihe nkedo kachasị.
Ogologo anụ ahụ dị n'ogologo 7.5 cm, nke ọdụ ya na-ewe 40-70%. Ibu ibu ruru gram 7.5. Agba nke akụkụ elu nwere ike ịdịgasị iche site na aja aja na-acha uhie uhie, akụkụ nke ala bụ ìhè.
Ogologo oge na-eri nri na ụmụ ahụhụ na larvaenke a na-achọta n'oké ọhịa, ma site na enwe, spiders, na earthworms. N'oge oyi, ọ na-adabere na mkpụrụ osisi larch, ọdịda nke nwere ike iduga oke ọnwụ nke anụ ahụ n'oge oyi.
Azụlite na-apụta n'oge okpomọkụ, nke na-emekarị n'ọgba aghara site na 2 ruo 11 pups.
Ọhụụ kachasị dị ukwuu nnukwu onye nnọchianya nke ụdị anụmanụ a. Ke adianade do, ọ na-adị ndụ na mpaghara a kpachibidoro nke Primorsky Territory, ya mere edepụtara ya na Red Book of Russia dị ka ụdị ndị na - adịghị adị na ọnụ ọgụgụ na - arịwanye elu. Amaghị na ọnụọgụgụ ndị mmadụ.
Ogologo oge - site na 7 ruo 10 cm, nke ọdụ na-akpata 70-75%. Ibu ibu ruru ogo 14. Akpụkpọ ahụ na-acha odo odo-agba aja aja, ogologo antennae na-ahụ nke ọma (n'elu 3 cm).
Ezigbo ihe atụ - foto agbakwunyere.
Na-eri ụmụ ahụhụ kwa ụbọchị dị ka ọ dị arọ. N'okwu a, anụ ahụ nwere ike ịnwụ ma ọ bụrụ na ọ naghị eri ihe karịa awa atọ.
Isi nri bụ earthworms, nke mejupụtara pasent 95 nke menu ya. Na-eji frogs, agwọ, obere òké, mkpụrụ osisi.
N'ịchọ nri, ọ nwere ike ịba n'ime ala dị arọ. N'ime otu afọ, ụmụ nwanyị nke nnukwu ịzụ ahịa na-eweta otu mkpụrụ.Otú ọ dị, ọnụ ọgụgụ ụmụ ehi amaghị.
Eke nha nha iche ichenke na-enye ohere ikpughe ya site na ụdị ndị ọzọ - otu nwere agba agba nke ọchịchịrị gbara ọchịchịrị, ma akpọ ụbụ aka nke ise.
A na-ebi ndụ na mpaghara taiga, site na Scandinavia na Pacific Ocean, na Belarus (nanị ụdị ndị nwere ike ibi na mba a). Hụrụ ndagwurugwu ndagwurugwu n'anya. Tinyere na Red Book of Karelia na mpaghara Moscow.
Isi nha - 6-9 cm, nke ọdụ akụkọ ya ruru 55%. Izu nha anya nke oma bu ihe di ka gram 6.5 O na-azuru umu ogwu na ogwu ha, nke o na-achọta n'ime ohia. N'oge oyi, ọ na-agafe mkpụrụ osisi spruce na osisi deciduous.
Bie ruo ihe ruru afọ 1.5. Oge mmeputara na mmeri na-amalite na mbubreyo mmiri. Ndi nwanyi kwa oge nwere ike iweta ụmụ iri na abụọ, 2-10 ụmụaka na nke ọ bụla.
Ọdịdị dị mma a na-ahụ anya bụ ụdị ọzọ a pụrụ ikpebi na-enweghị nha. Nke a gụnyere akpụkpọ ahụ mara mmanke na-esi n'ọchịchịrị na azụ na ìhè na n'akụkụ na-acha ọcha-acha ọcha na afo. Tụkwasị na nke a, na anụmanụ a na ọdụ dị ezigbo ajị.
Ebe a na-ekesa nke okpokoro isi si Urals gaa n'ụsọ oké osimiri nke Pacific Ocean. Na-ebi n'ugwu tundra, taiga na ugwu, a na-ahụkarị n'ime ebe obibi. Ebe na-ahụ n'anya nke tife na-agba ọgba aghara.
Enweghị ezi data na nri. O yikarịrị ka ọ dị iche na nchịkọta nke ndị nnọchiteanya ndị ọzọ nke ụdị a, nke gụnyere ụmụ ahụhụ, larvae na earthworms.
Ọ na-etolite na oge okpomọkụ, n'otu oge, ọ nwere ikike ịmụ nwa 8 ruo 10.
A na-achọta ọrụ n'ọtụtụ mba, na-ebi n'akụkụ niile nke okike - site na ntan na steppes.
Mkpụrụ dị iche iche na-adị site na 5 ruo 10 cm, a na-edepụta ụdị ụfọdụ dị iche iche na mpaghara Red Books.
Nri nke anumanu nile yiri nke a, o gunyere umu ohia, udiri na ikpuru. Mkpa na ugbo anaghị akpata.
Achọrọ ịmara ụdị ụdị ihe ọkpụkpụ dịnụ, otu esi kpochapụ ha na dacha, soro njikọ ahụ.